13/02/2018 - Page 4 sur 4 -
Fiatrehana ny rivodoza : Hohamafisina ny fiomanana
13/02/2018 admintriatra 0
Mbola ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra tanteraka i Madagasikara amin’izao fotoana izao, ary mbola ao anatin’ny vanim-potoanan’ny rivodoza ihany koa. Araka ny voalazan’ ny sampana mpamantatra ny toetr’andro aza, dia hisy rivodoza mafimafy kokoa handalo eto …Tohiny
Mandalo eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ny talen’ny Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA), John Ging. Nialohan’ny nihaonany mivantana tamin’ny Filohan’ny Repoblika sy ny praiminisitra, nanatanteraka fitsidihana ny minisitry ny Raharaham-bahiny …Tohiny
Gadra nitsoaka : Karohina fatratra i Lalao Adeline Aimé
Vehivavy iray 41 taona antsoina hoe Lalao Adeline Aimé, gadra nitsoaka teny amin’ny fonjan’i Manjakandriana no hifampitadiavan’ny mpitandro filaminana fatratra amin’izao fotoana izao. Namoahana taratasy fampikarohana, izay naparitaka eny amin’ny biraon’ny manam-pahefana mihitsy ity voafonja …Tohiny
« Mitaky trosa »
Tsindrian-daona mihitsy ny ankamaroan’ny malagasy hiandry izany firesahana mivantana amin’ingahy Andry Rajoelina izany. Fotoana iray mba hiresahan’ny olona mivantana ny fahasahiranana navelan-dRajoelina ho an’ireo namono tena ho azy tamin’ireny fanonganam-panjakana nataony ireny mantsy io. Andro …Tohiny
Tafapetraka ny birao vaovaon’ny komity mpanara-maso ny fifidianana, na ny KMF/CNOE taorian’ny fivoriambe nanatanterahana ny fifidianana. Lany hitantana izany mandritra ny dimy taona ny filohany vaovao, Andoniaina Andriamalazaray. Araka izany, nanambara ny teo anivon’ny birao ...Tohiny